हेर्नुहोस् यी फिल्म चु'म्बन कै कारण चर्चीत बनेका थिए
यतिबेला बिश्वभर नै हरेक क्षेत्रमा आर्थिक मन्दी लाइरहेको छ । कुनै पनि ब्यापार ब्यवसायमा आर्थिक मन्दी परेको छ ।
यसको प्रत्यक्ष असार फिल्मी क्षेत्रलाई समेत परेको छ । यसैबिच कलाकारहरु पनि आफ्नो दिनचर्या परिवार सँगै बसेर बिताइरहेका छन ।
विश्वभर राम्रो ब्यापार गर्ने बलिउड चलचित्रमा कहिले कुन कुराको चर्चा हुन्छ त कहिले कुन कुराको । यस्तै चर्चाहरु मध्य आज हामी चर्चा गर्न लगिरहेका छौँ, चु’म्बनका कारण चर्चा कमाएका चलचित्रको बारेमा ।
१. ये जवानी है दीवानी
रणबीर कपूर र दीपिका पादुकोणले ये जवानी है दीवानीमा अभिनय गर्दा दुबै जना रियल लाइफको प्रेमबाट अलग भइसकेका थिए । तर दुबैले फिल्ममा चु’म्बन सिन दिनु परेको थियो । सन् २०१३ मा आएको यस फिल्मको यो सिन निकै भाइ’रल भएको थियो ।
२. जीन्दगी ना मिलेगी दोबारा
जीन्दगी ना मिलेगी दोबारा फिल्ममा कटरीना कैफ र ऋतिक रोशनको चु’म्बन सिन्स निकै भाइ’रल भएको थियो । सन् २०११ म रिलिज भएको यो फिल्म जोया अख्तरले निर्माण गरेका थिए ।
३. आशीक बनाया आपने
सन् २००५ मा रिलिज भएको फिल्म आशीक बनाया आपनेको गीत निकै चर्चामा थियो । फिल्ममा अभिनेता इमरान हाश्मी र अभिनेत्री तनुश्री दत्तको बोल्ड सीन्स र लिपलक चु’म्बन निकै भाइ’रल बनेको थियो ।
सन् १९८८ मा रिलिज भएको फिल्म दयावानमा विनोद खन्ना र माधुरी दीक्षितको चु’म्बन सीन आज सम्म पनि पुराना दर्शकलाई याद हुनसक्छ । यो सिन फिल्मको सुपरहिट गित ’आजफिर तुमपे प्यार आया है’ बोलको गीतमा छायांकन गरिएको थियो ।
५. राजा हिन्दुस्तानी
आमिर खान र करिश्मा कपूर स्टारर फिल्म राजा हिन्दुस्तानी बलिउड बक्स अफिसमा सुपरडुपर हिटमा समावेश छ । सन् १९९६ मा रिलिज भएको यस फिल्मको एक गीतमा भएको दुबैको चु’म्बन सिन्स त्यस बेला निकै चर्चामा थियो ।
बलिउडका चु’म्बन हिरो उपमाबाट परिचित इमरान हाश्मी अभिनित फिल्म मर्डरको चु’म्बन सीन्स पनि निकै चर्चामा थियो । महेश भट्टको यस फिल्ममा इमरान र मल्लिका शेरावतबीचको इन्टिमेट लव सिन्स आजसम्म पनि चर्चामा छ । मर्डर सन् २००४ मा रिलिज भएको थियो ।
७. गोलियों की रासलीलाः रामलीला
संजय लीला भन्साली निर्देशसित फिल्म गोलियोकी रासलीलाः रामलीलामा रणवीर सिंह र दीपिका पादुकोणबीचको चु’म्बन सिन्स आजसम्म पनि चर्चामा छ । यी दुबै अहिले पतिपत्नी छन् । सन् २०१३ मा रिलिज भएको रामलिला सुपरहिट साबित भएको थियो ।
रणवीर सिंह र वाणी कपूर स्टारर फिल्म बेफिक्रेमा दुबै कलाकारबीचको लिपलक चु’म्बन सिननिकै भाइ’रल बनेको थियो । हुनत फिल्मले खासै राम्रो आम्दानी र प्रसंसा बटुल्न सकेन । तर फिल्मको चु’म्बन सिन चर्चामा थियो । फिल्म सन् २०१६ मा रिलिज भएको थियो ।
९. जब वी मेट
बलिउडमा राम्रो आम्दानी गरेको फिल्म हो जब वी मेट । यस फिल्मको शाहीद कपूर र करिना कपूरबीचको चु’म्बन सिन निकै चर्चामा थियो । यो फिल्म सन् २००७ मा रिलिज भएको थियो ।